ကိုယ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာ အမျိုးသားရှိတဲ့အခါကျ တော့ ကိုယ်ပင်ပန်းတဲ့ အချိန်မှာ၊ ကိုယ်မောတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ် မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို သူနဲ့အတူ မျှဝေလို့ရသေးတယ် ပေါ့နော်. . . Read More
သူနာမည်ကြီးတယ် ဆိုတာလည်း သရုပ်ဆောင် အရမ်းကောင်းလို့ နာမည်ကြီးတာ သရုပ်ဆောာင်ကောင်းလို့လည်း ပရိသတ်ချစ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ . . . Read More
ရွှေမှုံရတီအိုင်တင် တော်တော်များများက အမေရဲ့အိုင်တင်များတယ်။ အမေက ငယ်ငယ်တုန်းက မင်းသမီး အရမ်းဖြစ်ချင် ခဲ့တာဆိုတော့ သူလုပ်ချင်တဲ့ အိုက်တင်မှန်သမျှ ညီမကို အကုန်လုပ်ခိုင်းတာ. . . Read More
အလင်းထဲကို ပြန်လာဖို့ ဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့ ဘက်က ကူညီဖို့အမွန်း အသင့်ရှိနေ မှာပါ။ အနုပညာရှင်တွေကို လူသိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်မစဉ်းစားပဲ ပိုပြီး ပြောတက်ကြတယ်။ အဲ့လိုမျိုး. . . Read More
အနုပညာထက်​ ပညာရေးကို ပို ဦးစားပေးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယွန်းယွန်း
သရုပ်​ဆောင်​ပိုင်းတင်​ မကဘဲအသက်​ကြီး လာရင်​လည်း ထုတ်​လုပ်​သူတစ် ယောက်​အနေနဲ့ လုပ်​ရမယ်​ဆိုလည်း လုပ်​ကြည့်​ချင်​တယ်​။ ရေရှည်​ရပ်တည်​ဖို့ဆိုရင်​ ကိုယ့်​စီးပွားရေးနဲ့ပဲ ရပ်​တည်​ရ မယ်​. . . Read More
တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်ဖို့ ရုန်းကန် ကြိုးစားနေရတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုတော် ဇင်ကြီး
ရုပ်ရှင်က အခုဆိုရင် ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင်ကနေ ကျပ်သိန်း သုံးထောင်လောက်အထိကို အသုံးပြု ရိုက်ကူးနေကြပြီလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးညီညီထွန်းလွင်
စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် MBA တက်မယ့် နန်းဆုရတီစိုး
အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့ပဲ နန်းဆုရတီစိုးက လတ်တလောမှာ ICM Business Management & Administration ဘာသာရပ်ကို လေ့လာသင်ကြားနေကာ ဒီနှစ်အကုန်မှာ .....
အနန္တောအနန္တ (၅)ပါးနဲ့ ပရိသတ်ကိုကန်တော့ပြီးမှဇာတ်ကလေ့ရှိတဲ့ဝင်းနောင်
အခုတစ်ပတ်မှာလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဇာတ် မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝင်း နောင်ရဲ့ ဘာသာရေး သက် ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ် လေ့ရှိတဲ့ ဘာသာရေးလုပ် ဆောင်မှုများကို ပရိသတ် တွေသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်
''နန်းဆုက ငယ် ငယ်ကတည်းက ဂီတဘက်လဲ အရမ်းဝါသ နာပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သီချင်းဆိုရတာ ဝါသနာပါတာ ကျောင်း မှာဆိုရင်လည်း အမြဲတမ်းဆိုဖြစ်တယ်။ Musical Instruments တွေ ကိုလည်း လေ့လာရတာ အရမ်းဝါသ နာပါတယ်။ ကိုယ်က…
လိပ်​ပြာစံအိမ်​ရိုက်​ကူးနေရင်း နဲ့ကို ကြောက်​ခဲ့ရတယ်​ဆိုတာကိုလည်း...''အဲဒီအိမ်​မှာ ကစ်​တို့ ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​ပြီးသွားတဲ့ အချိန်​မှာ အပေါ်ထပ်​မတက်​ရဲဘူး။ ကစ်​တို့ မင်းသား၊ မင်း သမီးတွေကို နားနေတဲ့ အခန်းဆိုပြီး တစ်​ခန်းပေးထားတယ်​။ မရိုက်​သေးဘူးဆိုရင်​ အဲဒီအခန်းထဲမှာပဲ အကုန်​လုံးစုပြုံပြီး နားနေကြတယ်​။ အပေါ်ထပ်​လည်း မတက်​ဘူး။…
လိပ်​ပြာစံအိမ်​ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား ရိုက်​ကူးခဲ့တဲ့ အိမ်​ကြီးနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း ''အဲဒီအိမ်​ကြီးက နှစ်​ပေါင်းတစ်​ရာကျော်​နေပြီဆိုတဲ့ အငွေ့အသက်​ကြီးက ကျွန်​တော်​တို့ကို ရိုက်​နေရင်းနဲ့ကို စိတ်​လှုပ်​ရှားစေတယ်​။ အဲဒီအိမ်​ကြီးက အပြင်​မှာ....
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုနေလနဲ့ အတူတူ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက် အလှူအတန်းတွေများစွာ ပြုလုပ်လှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်က ဖခင်ဖြစ် သူ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ရွာမှာ စေတီတည်ထားသလို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်း ဘုရားပွဲပြုလုပ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သူမက ပြောပါတယ်။ ''ဘုရားတစ်ဆူကတော့ ပြီးသွားပြီပေါ့။ ရှေ့မှာလည်း…
''ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့ ကိုနေတိုး 'စုန်းပြူး'ဆိုတဲ့ကားမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်တော့ ဆိုဖူးတယ်။ အဲဒီ တုန်းက ကိုဝင်းထွန်းထွန်းက ဖော်ကာ ကြိုက်တာလုပ်ဆိုပြီး ဇာတ်ညွှန်း လေး ပေးလိုက်ပြီးတော့ ပေးရေးတာဆိုတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကိုသားကြီး မဆုံးခင်တုန်းကတော့ သူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ သူပြောတဲ့ဟာလေး တွေထိုင်ပြီးတော့…
''ကျွန်တော် ကားရိုက်နဲ့နယ်သွားရင် ပြောကြတယ်။ အလင်းရောင်က ဇာတ်ကားတွေ MTV တွေမှာဆိုရင် သေးသေးလေး အပြင်မှာ ဖက်တီးကြီးတဲ့။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီ၂ဝ၁၉ မှာ Body ကိုသူများတွေ လိုလှချင်တယ်။ Change ချင်တယ်။ နောက်ပြီး…